Waa maxay jiilaalka Niyukleerka? | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay jiilaalka Niyukleerka?
Qayb ka mid ah filimka «Wadada»
Waxaa laga yaabaa inaan soo sheegnay ereyga "jiilaalka nukliyeerka" waqti, taas oo ka dhalanaysa dhacdo halis ah ama dhacdo saadaasha hawada. Tusaale ahaan, maxaa lafilayaa inay dhacaan hadii Campi Flegrei supervolcano. Qaboojintan deg degga ah ee meerahu ku xanuunsaneyso waxay la mid noqon doontaa jiilaalka nukliyeerka. Laakiin waa maxay runti?
Jiilaalka noocan ah ayaa ah fikradda ka kooban xilliga cimilada ee ka dhalan doonta dagaalka nukliyeerka ka dib. Cawaaqibta waxay noqon doontaa mid aad u baaxad weyn oo dhacdo la yiraahdo "dhalo-yare" ayaa soo bixi doonta. Qiyaas ahaan hadalkayga, waa luminta degdegga ah ee wadarta ama qaybo ka mid ah nooc ama dad. Dhacdadani waxay keenaysaa waxa loogu yeero "hidde-wadaha" kaas oo sidoo kale, si aan macquul ahayn u dhiirrigeliya isbeddellada noocyada. Waa natiijo ahaan falcelin silsilad ah oo aan noole ka badbaadi doonin, oo xitaa bini'aadamku ku khasbanaadeen inay soo maraan taariikhdooda.
1 Cawaaqibta xilliga qaboobaha
2 Sidee culeys u dhacayaa?
2.1 Dadku goorma ayuu soo maray?
Cawaaqibta xilliga qaboobaha
Marka la soo koobo, xilliga qaboobaha ee Nuclearka ayaa ah ifafaalaha cimilada ee ka dhasha isticmaalka aan kala sooca lahayn ee bambooyinka nukliyeerka. Qaboojinta caalamiga ah waxay ka imaan doontaa weyn daruuro ciid ah oo u kici lahaa dabaqadda loo yaqaan 'stratosphere'. Aaggan, oo ku yaal inta u dhexeysa 10 iyo 50 km sare, wuxuu buuxin lahaa waxyaabahaas ka hortagi lahaa marinka iftiinka qoraxda. Kaliya maaha dagaal lala galo bambooyinka atomiga, waxay raacdaa in supervolcano ay sidoo kale yeelan doonto saameyn isku mid ah sababo la xiriira tiirarka waaweyn ee walxaha loo sii daayay xagga sare.
Si ka duwan jiilaalka caadiga ah ee aan garan karno, tani waxay sababi doontaa hoos u dhac ku yimaada gelitaanka iftiinka qoraxda. Noolaha nool ee fuliya sawir-qaadista, waxay ka dhigan tahay geerida ama geerida noocyada. Waxyaabaha kale ee aan la sii saadaalin karin ayaa ah, in kasta oo la og yahay in saamaynteeda ay waxyeello u geysan doonto, daruurtaas ciidda ah janada ayuu ku nagaan karaa bilo badan. Immisa ka badan, waxyeelo intaa ka badan u geysata nidaamka deegaanka. Dhimashada dhirta, way iska imaan doontaa iyada, mawjad dabar go 'ah kadib silsiladda cuntada. Dhirta ka dib, geedaha yaryar ayaa iman lahaa, oo iyaga dabadoodna dugaaggu. Waxaa macquul ah iyadoo ku xiran baaxadda iyo aagga, hawada aan la neefsan karin lafteeda ayaa sababtay in xayawaanku isla markiiba ku dhintaan gobollada. Marka loo eego aragtiyaha qaar, dhacdadan ayaa sidoo kale loo isticmaalay sharaxaad ku saabsan dabar goynta dinosaurs-ka ee meteorite oo sababay saameyn la mid ah.
Sidee culeys u dhacayaa?
"Dhalo-yare" waa erey loo adeegsado cilmiga bayoolajiga si loo tixraaco waqtiyadii la soo dhaafey halkaas oo, iyada oo loo marayo dhacdooyin taxane ah, tirada noocyada ay si aad ah hoos ugu dhacday tiradoodu oo xitaa ay gaartey dabar go ' Sababaha ayaa u eg inay had iyo jeer la socdaan musiiboyin waaweyn. Marka markii horaba intaan leenahay tiro dad ah oo leh kala duwanaansho hidde-weyne, hadda wey yar tahay oo wax yar baa lagu kala duwanaan karaa.
Waxaas oo dhami waxay horseedayaan jarid in ugu yaraan isbeddelku u horseedo a hidde-wadaha, iyada oo ay ugu wacan tahay takhasus iyo isbeddel la-qabsi. Mid kasta oo ka mid ah waagii la duubay, sidaas ayay ahayd. Kuwa ka badbaaday masiibadan, sida jiilaalka Nukliyeerka, waxay dardar gelinayaan hidda-wadaha hidde iyo isbeddelka, sidaas awgeedna waxay soo saaraan noocyo cusub oo noocyo ah. Dabeecadaha hiddo-wadaha intooda badani (ama kuwa ugu xoogan) waxay u muuqdaan inay xasilinayaan oo ay sii socdaan, kuwa daciifka ah ama kuwa tirada yarna ay dabar go’ayaan.
Dadku goorma ayuu soo maray?
75.000 sano kahor. Waxaa loo yaqaan aafada Toba, supervolcano-kan laga helay Indonesia ayaa qarxay. Hadda waa haro durdurka weyn ee ku yaal awgeed. Waxaa lagu qiyaasaa in noocyada aadanaha ay yareeyeen dhowr kun oo qof. Intaa waxaa dheer, hoos u dhac ku yimaadda isbeddelka noocyada kale ayaa ku soo beegmaya isla muddadaas.
In kasta oo aan ka hadalnay volcanoes, xiriirkooda ay la leeyihiin jiilaalka nukliyeerka awgood, culeysyada ayaa aad u kala duwan. Taasi waa, kuma koobnaan karaan oo keliya saameynta cimilada, laakiin belaayooyin ama cudurro faafa. Tusaale, balaayadii madoobaa ee ku noolayd Yurubta Dhexe. Ama in ka badan, sida qarax, abaar iyo cudurro badan sidii ka dhacday Iceland markii uu qarxay Harada sanadkii 1783.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay jiilaalka Niyukleerka?
Duufaanta Ophelia ayaa ku dhufatay Ireland maanta jabinta rikoorrada